Mifantoha tahaka ny tetikasa fanamafisam-peo Huozhou
Mofo manify sy lug Type BV
Valizy lolo flange
Valin'ny vavahady mafy tombo-kase
Valizy malemilemy vavahady
rano Control Valve
Globe miditra tsimoramora
Shanxi Huozhou centre d'exploitation Huozhou tetik'asa fikojakojana "indostrialy telo sy indostrialy iray", toa ny valizy nandray anjara tamin'ny fanovana ny tetikasa tamin'ny volana jona 2020, izay "famatsiana telo sy indostria iray" dia manondro ny famatsian-drano, famatsiana herinaratra, fanafanana ary fitantanana fananana ao ny faritry ny mpianakavin'ny orinasam-panjakana (ao anatin'izany ny orinasa afovoany sy ny orinasam-panjakana eo an-toerana). Ny "fisarahana telo sy indostria iray" dia manasongadina ny asa fitantanana misy politika sy matihanina matanjaka, fandrakofana midadasika ary asa be pitsiny izay anaovan'ny orinasam-panjakana (ao anatin'izany ny orinasa sy oniversite fikarohana siantifika) ny fitantanana ny rano, herinaratra ary fanafanana trano. miasa ao amin'ny faritry ny fianakaviana avy amin'ny orinasam-panjakana ary mamindra azy ireo amin'ny sehatry ny asa sosialy ho an'ny fitantanana.
Toy ny valves ny Huozhou fanafanana tetikasa tena manome lolo valves ,herinaratra valves sy welded valves baolina.
Sary famatsiana (1)
Fomba fampifandraisana valizy lolo elektrika
Indrindra: karazana flange sy karazana wafer; Ny toe-javatra famehezana ny valizy lolo elektrika dia misy ny tombo-kase fingotra sy tombo-kase vy. Ny jiro famantarana ny herinaratra dia miseho mandritra ny fanokafana sy ny fanidiana ny valizy lolo elektrika. Ny vokatra dia azo ampiasaina ho toy ny vavahady fijanonana sy ny vavahady mifehy ny rafitra fantsona. Miaraka amin'ny fitaovana fanokafana sy fanidiana tanana, raha vantany vao tapaka ny herinaratra dia azo ampiasaina amin'ny tanana tsy misy fiatraikany amin'ny fampiharana.
Fitsipika miasa amin'ny valizy lolo elektrika
Ny famatsiana herinaratra miasa matetika dia misy: AC220V, AC380V, sns. Famantarana fampidirana: 4 ~ 20mA, 0 ~ 10V ary ireo fambara malemy hafa ankehitriny. Aorian'ilay mpampita herinaratra azo ovaina sy tsorakazo mifamatotra dia mifandray sy debugging; Mampiasà angovo herinaratra ho toy ny hery manosika hamily ny takelaka valizy lolo mandritra ny 0 ~ 90 ° fihodinan'ny ampahany. Raiso ny mari-pamantarana 4 ~ 20mA avy amin'ny rafitra fanaraha-maso automativa indostrialy hifehy tsara ny mari-pahaizana fanovana valizy, mba hahatratrarana ny lalàna sy fifehezana ny masontsivana fangatahana samihafa toy ny fikorianan'ny, ny mari-pana ary ny tsindry.
Ny toetra ara-teknikan'ny vy
1. Ny firafitry ny vatan'ny valizy dia miraikitra tsy misy famoahana ivelany.
2. Ny seza valizy dia misy peratra famehezana PTFE sy lohataona, izay manana adaptabilité mafy amin'ny tsindry sy ny fiovan'ny maripana ary tsy hamoaka famoahana ao anatin'ny sehatry ny fampiasana.
3. Ny firafitry ny famoahana anti-leakage an'ny vatan'ny valva dia misy gasket PTFE mamehezana tena iray ary peratra O iray eo am-pototry ny vatan'ny valva, peratra O roa ary gasket PTFE roa mba hahazoana antoka fa tsy misy famoahana.
4. Ny fitaovan'ny vatan'ny valva dia mitovy amin'ny an'ny fantsom-panafody, ary tsy hisy ny fihenjanana tsy mitovy, ny fitrandrahana ary ny fiovana noho ny horohoron-tany sy ireo fiara namakivaky ny tany.
5. Ny vatan'ny valizy dia maivana ary mora hafana.
6. Ny valizy baolina nalevina mivantana dia azo halevina mivantana any ambanin'ny tany nefa tsy manamboatra lavarangana lehibe. Ny lavadrano kely mivelatra ihany no mila apetraka amin'ny tany, izay tena mahavonjy ny vidin'ny fanamboarana sy ny fotoanan'ny injeniera.
7. Ny halavan'ny vatan'ny valizy sy ny haavon'ny vongan-tsofina dia azo ahitsy arakaraka ny fepetra takiana amin'ny fananganana sy ny endrika fantsona.
8. Ny fahamendrehan'ny tontolon'ny tontolony dia tena marim-pototra, maivana ny fandidiana ary tsy misy fanelingelenana ratsy.
10. Misy fomba fifandraisana roa: welding sy flange.
11. Mode d'exploitation: tantanana, fitaovana (mitsangana / marindrano)
12. Eo ambanin'ny toetry ny fandidiana mahazatra sy ny fampiasana ny valva, ny fe-potoana fiantohana dia 20 taona.
Firafitry ny valves baolina atsofoka
1. Ny valizy dia mitazona fantsom-by vy tsy mitongilana vita amin'ny valizy milina vy.
2. Ny vatan-tsolika dia vita amin'ny vy vy AISI303 ary ny vatan'ny volo dia vita amin'ny vy vy AISI304. Izy io dia vita amin'ny famitana ny fitotoana volo ary manana fahombiazan'ny famehezana tsara sy fanoherana ny harafesina.
3. Ny famehezana dia mandray PTFE mitazona karbaona miady amin'ny famehezana famehezana, ary ny tsindry ratsy dia eo amin'ny sehatra boribory, ka ny tombo-kase dia manana tombony amin'ny fivoahan'ny aotra sy ny androm-piainana maharitra.
4. Fomban'ny fifandraisana amin'ny valva: welding, kofehy, flange, sns. Ho safidin'ny mpampiasa. Fombam-pandefasana: ny rafitra fikirakirana, turbine, pneumatic, herinaratra ary fampitaovana hafa no noraisina, ary ny switch dia malefaka sy maivana.
5. Ny valva dia manana tombony amin'ny firafitra mifototra, lanja maivana, insulateur mora mora ary fametrahana mora. Ity valizy ity dia apetraka marindrano amin'ny ankapobeny.
6. Ny valizy baolina miharo volo dia novolavolaina tamin'ny alàlan'ny fitsangatsanganana ny haitao avy any ivelany sy ny fitambarana amin'ny tena zava-misy any Shina. Natao tany Chine izy io fa tsy nafarana mba hamenoana ny banga anatiny. Ampiasaina be izy io amin'ny sehatry ny fantsom-pandrosoana lavitra toa ny entona voajanahary, solika, fanafanana, indostrian'ny simika ary tamba-jotra amin'ny fantsona herinaratra.
Sarin'ny tranokala (1)
Sarin'ny tranokala (2)
"Famatsy telo sy indostria iray" no mampihena ny vesatry ny orinasam-panjakana ary mifantoka amin'ny fampandrosoana ny orinasa lehibe. Izy io koa dia manampy amin'ny fampidirana loharanon-karena, fanovana ary fanavaozana ny fotodrafitrasa ary manatsara ny tontolon'ny fiainana ny mpiasa. Toy ny valizy dia mifikitra hatrany amin'ny filozofian'ny orinasa "fahamendrehana, fanavaozana, fiaraha-miasa ary fandresena", mamolavola ny kalitaon'ny vokatra sy ny fahafaham-pon'ny mpanjifa ary mihoatra ny tenany amin'ny fikatsahana tsy tapaka ary ny fampandrosoana maharitra.
Fotoana fandefasana: Jan-13-2022
I12, Tengfei Base, Xiaozhan Ind. Zone, Jinnan Dist., Tianjin, Shina (Tanibe)
Mitaky fikojakojana sy fivoriambe maharitra...
Ny fitsipiky ny valva famehezana valva vacuum p...
Ny anaran'ny valve sy ny modelin'ny valve...
Fitsapana tanjaka sy fomba fitsapana famehezana ny ...
Fikojakojana isan'andro valva ara-teknika lehibe ...
© Copyright - 2018-2020: Voatahiry ny Zo rehetra.